chemwenje | Pfungwa A Forex Trading SYSTEM
Forex nechigadziko chemwenje muenzaniso chakarurama siyana mirayiridzo kuona nzvimbo kutengesa kana Forex musika kupinda ,pamwe ichi chakaisvonaka Forex muzvinashawo anogona nokupinza zvimwe zviratidzo somunhu gudzazwi zvakanaka nzvimbo .
Category Archives: chemwenje
ganifx/ Chikumi 21, 2017/ chemwenje/ 0 mashoko
MUENZANISO Inside BAR Muenzaniso KUPINDA ( 2 )
MUENZANISO Inside BAR Muenzaniso KUPINDA ( 1 )
BAR romance Inside ZIVO
ganifx/ Chikumi 8, 2017/ chemwenje/ 0 mashoko
Yaa wakakakak Pola chemwenje ZVITATU KABHUKU rarira
ganifx/ Chivabvu 31, 2017/ chemwenje, Fibonacci/ 0 mashoko
Pada pembahasan analisa dengan candlestick ini, kita akan menggunakan toll pembantu yaitu Fibonacci Retracement. Sezvatadzidza pamwe kuti Fibonacci retracement kuti basa iri kuyera sebarapa zvakawanda nokururamiswa pamusoro kuitika. Nah, pamwe Fibonacci uyu isu ichaongorora musika ari kubatanidzwa -pola chemwenje mapatani vane takadzidza kwokutanga. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melakukan modifikasi…
UITE romance – Chemwenje muenzaniso IN Forex
ganifx/ Chivabvu 31, 2017/ chemwenje/ 0 mashoko
Pfupiso KUTSANANGURWA chemwenje TERBENTUKNYA
ganifx/ Chivabvu 30, 2017/ chemwenje/ 0 mashoko